Nucleus ပြောင်းလဲခြင်းသည် Dopamine Efflux accumbens အထီးကြွက်များတွင် Coolidge သက်ရောက်မှုအတွင်း (1997) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အမျိုးသားသည်အထိအတွက် Coolidge Effect စဉ်အတွင်းနျူကလိယ Accumbens Dopamine Efflux အတွက် dynamic အပြောင်းအလဲများ (1997)
ဒန်းနစ်အက်ဖ် Fiorino, Ariane Coury နှင့် အန်သိုနီ G. အ Phillips က
အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ် 15 ဇွန်လ 1997, 17 (12) 4849-4855; Doi: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.17-12-04849.1997
အဆိုပါ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ဝတ္ထုလက်ခံအိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်တုံ့ပြန်သည့် "လိင်ဝ" တိရိစ္ဆာန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ reinitiation ဖော်ပြသည်။ လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူများစတင်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် mesolimbic dopamine (DA) စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍပေး microdialysis နျူကလိယ accumbens (NAC) DA သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းဂီယာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ reinitiation စောင့်ကြည့်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အစောပိုင်းကအစီရင်ခံစာများနှင့်အတူသဘောတူညီချက်မှာတော့မျက်နှာပြင်နှင့်သုတ်ရည်ထိနောက်ကွယ်မှတစ်ခု estrous အမျိုးသမီး၏တင်ဆက်မှု NAC DA efflux အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ DA metabolites, dihydroxyphenylacetic အက်ဆစ်နှင့် homovanillic အက်ဆစ်၏ပြင်းအား, မွငျ့မားကျန်ရစ်ပေမယ့်အခြေခံတန်ဖိုးများ NAC DA ပြင်းအား၏ပြန်သွား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေတဲ့ကာလနှင့်တိုက်ဆိုင်။ မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှတစ်ဝတ္ထုလက်ခံအမျိုးသမီး၏တင်ဆက်မှုဝတ္ထုအမျိုးသမီးနှင့်အတူသက်တမ်းတိုးသုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းသိသိသာသာလုပ်ခဲ့ပြီးခဲ့သော NAC DA အတွက်အနည်းငယ်တိုးခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ဒေတာတစ်ဝတ္ထုလက်ခံအမျိုးသမီး၏စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခုလိင်ဝအထီးကြွက်များတွင် NAC DA ဂီယာတိုးမြှင့်ဖို့အစေခံစေခြင်းငှါ, ဤအလှည့်၌, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ reinitiation နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
dihydroxyphenylacetic အက်ဆစ် (DOPAC)
homovanillic အက်ဆစ် (HVA)
မွတ်မပြေနိုင်သောရန် copulated မူကြောင်းကိုတစ်ဦးကအထီးကြွက်ကနဦးအမျိုးသမီးတစ်ဦးတ္ထုလက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူအစားထိုးနေသည်ဆိုပါကနောက်တဖန်မိတ်ရန်သွေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဒါက Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်လူသိများခံရဖို့ရောက်လာပြီနှင့် (နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်အတော်များများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Wilson က et al ။ , 1963) ။ တစ်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးထံမှလှုံ့ဆော်မှုနေဆဲသုတ်ရည်ထိသွေးဆောင်နိုင်သောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပင်ပန်းနွမ်းနယ်သို့မဟုတ်မော်တော်စိတ်ကျရောဂါအဖြစ်အထွေထွေအချက်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation များ၏သရုပ်ပြည်နယ်ရှင်းပြဖို့လုံလောက်သောမရှိကြပေ။ လိင်မွတ်မပြေလည်းကွဲပြားခြားနားသော neurotransmitter စနစ်များအပေါ်ပြုမူနိုင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများအမျိုးမျိုး၏အုပ်ချုပ်မှုအသုံးပြုပုံသိသိသာသာဒီဂရီအထိ pharmacologically "ပြောင်းပြန်" နိုင်ပါသည်။ ယင်းဆေးဝါးများ yohimbine, 8-Oh-DPAT (ပါဝင်သည်Rodriguez-Manzo နှင့်ဖာနန်ဒက်ဇ-Guasti, 1994, 1995a), nalaxone (Pfaus နှင့် Gorzalka, 1987; Rodriguez-Manzo နှင့်ဖာနန်ဒက်ဇ-Guasti, 1995a,b), နှင့် apomorphine (Mas et al ။ , 1995c) ။ ဒီဆေးတွေရဲ့အရံအရေးယူမှု (erectile function ကိုအပေါ်ဥပမာ adrenergic သက်ရောက်မှု) ထွက်အုပ်ချုပ်မရနိုင်ပေမယ့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအခြေခံအလယ်ပိုင်းယန္တရားများအပေါ်သက်ရောက်မှု (ရွေးချယ်အလယ်ပိုင်း noradrenergic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်စမ်းသပ်ချက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာအဆိုပြုထားပြီRodriguez-Manzo နှင့်ဖာနန်ဒက်ဇ-Guasti, 1995a) နှင့် medial preoptic ဧရိယာ (ထဲမှာ dopaminergic ဇီဝြဖစ်စောင့်ကြည့်ကြောင်း microdialysis စမ်းသပ်ချက်Mas et al ။ , 1995a,b).
အလယ်ပိုင်းယန္တရားများအတွက် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဝိသေသများ၏ reinitiation ဖျန်ဖြေခြင်းအလိုငှါပေးထားသောတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟာ NAC ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာကနေထုတ်လုပ်တဲ့ယင်း mesolimbic dopamine (DA) စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Mesolimbic DA (ထိုကဲ့သို့သောလိင်လက်ခံအမျိုးသမီးထံမှတွေကိုအဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကဲဖြတ်ပါဝင်ကြောင်းရှုပ်ထွေး Integrated ဖြစ်စဉ်များအတွက်အဓိက modulator တွေကိုအဖြစ်ပြုမူဟန်နှင့်သုတ်ရည်ထိအပါအဝင်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေ၏အဖှဲ့အစညျးFibiger နှင့် Phillips က, 1986; ဘလက်ဘန်း et al ။ , 1992; Phillips က et al ။ , 1992; LeMoal, 1995; Salamone, 1996).
midbrain DA အာရုံခံမူလတန်းဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုတုံ့ပြန်သော်လည်း, ဝတ္ထုသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းရခက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှု (ထပ်ခါတလဲလဲသင်တန်းများကျော်အများဆုံးစေ့စ့စပ်စပ်အာရုံခံ activation သွေးဆောင်Fabre et al ။ , 1983; Schultz, 1992; Mirenowicz နှင့် Schultz, 1994) ။ ကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် mesolimbic DA များအတွက်အရေးပါသော facilitatory အခန်းကဏ္ဍကိုပံ့ပိုးသောသက်သေအထောက်အထားများမှာများစွာသောသဘောတူညီချက် (ရှိပါသည်Pfaus နှင့် Everitt, 1995), နှင့် microdialysis လေ့လာမှုများ၏နံပါတ် (အစာစားချင်စိတ်များနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့်စဉ်အတွင်း NAC DA efflux အတွက်တိုးသတင်းပို့Pfaus et al ။ , 1990; Pleim et al ။ , 1990; Damsma et al ။ , 1992; Wenkstern et al ။ , 1993; Fumero et al ။ , 1994; Mas et al ။ , 1995b) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ reinitiation ၏ neurochemical ဆက်စပ်မှုအပေါ်အတော်လေးအနည်းငယ်ဒေတာ, သို့သော်ရှိပါတယ်။ ၏လျှောက်လွှာ Vivo အတွက် အဆိုပါ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုစဉ်အတွင်း mesolimbic DA neurotransmission စောင့်ကြည့်ဖို့ microdialysis တစ်သုတ်ရည်ထိအတွက် NAC DA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆနျးစစျဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောနှင့်သုတ်ရည်ထိ၏ reinitiation ပေးပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောစတင်ခြင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော precopulation တန်ဖိုးများသို့မဟုတ်ဖို့ NAC အတွက် extracellular DA ပြင်းအား၏ပြန်လာဖြင့်လိုက်ပါသွားဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိ (1) နှင့် (2) တစ်ဦး "တွင် copulatory အပြုအမူများ၏ reinstatement ရှိမရှိ: တစ်ဦးက microdialysis စမ်းသပ်မှုအောက်ပါဆုံးဖြတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့သည် လိင်ကတစ်ဝတ္ထုလက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူအထီးကြွက် NAC DA efflux အတွက်တိုးဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ် "ဝ။
ဘာသာရပ်များ။ အထီး Sprague Dawley ကြွက်, (ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှ) ကတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာမှရရှိသောနှင့်ချားလ်စ်မြစ်ကနေဒါ (စိန့် constant မှာ Quebec, ကနေဒါ), မှရရှိသောအမျိုးသမီး Long-အီဗန်ကြွက်, ဝါယာကြိုးကွက်အိတ်များ၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည် (18 ) လှောင်အိမ်နှုန်းငါးသီးခြားကိုလိုနီခန်းထဲမှာ; 25 စင်တီမီတာ× 65 ×။ ကိုလိုနီအခန်းပေါင်းတစ်ပြောင်းပြန် 20 နာရီအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာအပေါ် ~12 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူချိန်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ကြွက်အစားအစာ (Purina Rat Chow) နှင့်ရေန့်အသတ်လက်လှမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ဦးနှောက် microdialysis မတိုင်မီခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်အမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်း။အမျိုးသမီးကြွက်အနည်းဆုံး4ရက်သတ္တပတ်စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ halothane ဓာတ်ငွေ့မေ့ဆေး (Fluothane, Ayerst Laboratories) အရမြန်မာနိုင်ငံသ ovariectomized ခဲ့ကြသည်။ ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွအမျိုးသမီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ် session တစ်ခုမတိုင်မီအသီးသီး, အရေပြားအောက်ဆုံး estradiol benzoate (10 μg) ၏ထိုးခြင်းနှင့်ချို့ယွင်းသော (500 μg) က 48 နှင့်4နာရီသွေးဆောင်ခဲ့သည်။ အထီးကြွက်နှစျကွိမျအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ပြခဲ့ 4, ဆိတ်ကွယ်ရာdဝါယာကြိုးကွက်ကြမ်းပြင်နှင့်အတူ Plexiglas အခန်းများ (35 × 35 × 40 စင်တီမီတာ) ၌တည်၏။ နှစ်ခုစိစစ်စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းပထမဦးဆုံး intromission ၏5မိအတွင်းအမျိုးသမီးနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်၏တင်ဆက်မှု၏ 15 မိအတွင်း intromission ပါဝင်သည်သောစွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်း, ရောက်ရှိခဲ့သည်သာအထီးကြွက် microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးလမ်းညွှန် cannulae နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။
အထီးကြွက် (n = 5) 100 stereotaxic ခွဲစိတ်မတိုင်မီ / ကီလိုဂရမ်, ip) နှင့် xylazine (10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) Mg (ketamine Hydrochloride နှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည်။ Microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးလမ်းညွှန် cannulae (19 gauge) က NAC (bregma ထံမှသြဒီနိတ်:; medial, ± 1.7 မီလီမီတာ; ventral, -1.1 မီလီမီတာ; anterior + 1.0 မီလီမီတာအပြားခေါင်းခွံ) ကျော်မြန်မာနိုင်ငံသကိုထညျ့သှငျးခဲ့ကြခြင်းနှင့်ပါးစပ်တွင်း acrylic နှင့်အတူဦးခေါင်းခွံမှလုံခြုံယောက် ရတနာရဲ့ screw နှစ်ခု။ နှစ်နိုင်ငံလမ်းညွှန် cannulae implants အောင်မြင်တဲ့ microdialysis စမ်းသပ်မှုများအတွက်အခွင့်အလမ်းတိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တစ်ဦးတည်းသာ cannula တစ်ခုချင်းစီကိုကြွက်အတှကျလိုအပျခဲ့သညျ။ အထီးကြွက်စမ်းသပ်မှု၏ကျန်ရှိသောများအတွက် corncob အိပ်ယာနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ပလပ်စတစ်အိတ်များအတွက်တစ်ဦးချင်းသျောခဲ့ကြသည်။ တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ လေ့ကျင့်ရေး၏ဤအပိုင်းတစ်ပိုင်းအတွင်းစမ်းသပ်ခြင်းအခန်းထဲကကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့အခန်းသို့အခနျးခှဲဝေတဲ့လျှော Plexiglas မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ အထီးကြွက်နောက်ပိုင်းတွင်ကြီးမားတဲ့အခန်းနှင့် 15 မိသို့မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်, အမျိုးသမီးမျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှထားရှိခဲ့ပါသည်။ တစ်ဦး 15 မိကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာလပြီးနောက်, မျက်နှာပြင်မှဖယ်ရှားခဲ့သည်, နှင့်ကြွက် 30 မိဘို့ copulate ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ သုံးလေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများတိုင်း4ဃ, တဦးတည်းကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အားလုံးကြွက်တိုင်း session တစ်ခုအတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းရောက်ရှိခဲ့သည်။
အကျိုးသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်မှု Coolidge ။ ကြွက်ဟာ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်မှုမပြုမီ microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး 12-18 နာရီနှင့်အတူတဖက်သတ်ထဲထညျ့နှင့်အစားအစာနှင့်ရေအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူစမ်းသပ်အခန်းထဲက၏ကြီးမားသောအခန်း၌ထားကြ၏။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများနံနက်တွင်, microdialysis နမူနာတိုင်း 15 မိကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုသည်အောက်ပါခုနစ်ခုဆက်တိုက်ဆင့်ပါဝင်သည်: (1) အခြေခံ (အနည်းဆုံး 60 မိ); မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှ (2) အမျိုးသမီး 1 (15 မိ); တစ်တောင်ပေါ်မှာမပါဘဲလွန်နေတဲ့3မိအချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်အမျိုးသမီး 1 နှင့်အတူ (30) သုတ်ရည်ထိ; မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှအမျိုးသမီး4၏ (1) ပြန်လည်လက်ခံကျင့်သုံးဖို့ (15 မိ); တစ်ဦး5မိကာလအတွက်အမျိုးသမီး 1 မှ (15) access ကိုအဘယ်သူမျှမ (အထိုင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယျလျှင်, ဒီအဆင့်အဆင့်3အဖြစ်ဆက်ဆံခဲ့သည်) mounting ရှိခဲ့သည်ပေး; မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှအမျိုးသမီး6၏ (2) နိဒါန်း (15 မိ);7မိဘို့အမျိုးသမီး2နှင့်အတူ 60) သုတ်ရည်ထိ။
အပြုအမူတစ်ခု JVC ကဗီဒီယိုစနစ်အား အသုံးပြု. အနိမ့် illumination အောက်မှာရိုက်ကူးနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအခန်းတစ်ခန်းအပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိဗွီဒီယိုတစ်ခု Monitor ပေါ်မှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစံအတိုင်းအတာတစ်ခုကွန်ပျူတာနှင့်သင့်လျော်သော software များ ( အသုံးပြု. မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်ကေတီဟုမ်း et al ။ , 1987).
အဆိုပါ microdialysis စမ်းသပ်မှုပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များ chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည်တစ်ခုအလွန်အကျွံပေးခဲ့ခြင်းနှင့်ဆားနှင့် formalin (4%) နှင့်အတူ intracardially perfused ။ ဦးနှောက် microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး၏နေရာချထားဆုံးဖြတ်ရန်လိုက်သည်ကိုများနှင့်အေးခဲလျက်, နောက်ပိုင်းတွင်, Coronal ကဏ္ဍများ cresyl ခရမ်းရောင်နှင့်အတူစွန်းကြ၏။ အဆိုပါ NAC အတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားမှုကိုနှင့်အတူသာလျှင်ကြွက်အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
Microdialysis နှင့် HPLC-လြှပျစစျထောက်လှမ်း။Microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် distal အဆုံးမှာတစ် semipermeable ဆွန်းဖိုင်ဘာအမြှေးပါး (2 မီလီမီတာအမြှေးပါးထိတွေ့, 340 μmပြင်အချင်း, 65000 မော်လီကျူးအလေးချိန် cutoff, Filtral 12, Hospal) နဲ့ဒီဇိုင်းအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိကြ၏။ စုံစမ်းစစ်ဆေး 1.0 (ကပြုပြင်ထားသောဖုန်းမြည်သံရဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ 0.01 μl / မိနစ်မှာ perfused ခဲ့ကြသည် m ဆိုဒီယမ်ဖော့စဖိတ်ကြားခံ, သော pH 7.4, 1.3 မီတာmCaCl2, 3.0 မီတာm KCl, 1.0 မီတာmMgCl2, 147 မီတာm တစ်ဦး gastight ပြွတ် (Hamilton က, Reno, NV) နှင့်တစ်ဦးပြွတ်စုပ်စက် (မော်ဒယ် 22, ဟားဗတ်ယန္တရား, တောင် Natick, MA) ကို အသုံးပြု. NaCl) ။ တစ်ဦးက microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးလမ်းညွှန်ကော်လာသည့်ဧည့်လမ်းညွှန် cannula အတွင်းရှိ microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးလုံခြုံရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ စမ်းသပ်အခန်းထဲက၏ထိပ်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားခဲ့တဲ့အရည်ဆုံလည် (Instech 375s) ကိုပူးတွဲတစ်ဦးကသံမဏိကွိုင်, (ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေး Tube ကာကွယ်ပေးရန်အသုံးပြုခဲ့သည်Fiorino et al ။ , 1993).
Beckman, ဖူလာ, CA, ODS5μm, 15 စင်တီမီတာ, 4.6 မီလီမီတာ, အတွင်းအချင်း; DA နှင့်၎င်း၏ metabolites dihyroxyphenylacetic အက်ဆစ် (DOPAC) နှင့် homovanillic အက်ဆစ် (HVA) ပါဝင်သည်ရာ Microdialysate Analytics, ပြောင်းပြန်-အဆင့် Chromatography (Ultrasphere ကော်လံများကကွဲကွာခဲ့သည် ) တစ်ဦး 0.083 သုံးပြီးm ဆိုဒီယမ် acetate ကြားခံ, သော pH 3.5 (5% Methanol) ။ Analytics ပြင်းအားလြှပျစစျ (EC) ထောက်လှမ်းခြင်းဖြင့် quantified ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါယန္တရားတစ်ခု Bio-Rad (Richmond,, CA) ဘုံဘိုင်တခု Valco တူရိယာ (ဟူစတန်, တက္ကဆပ်) EC10W Two-အနေအထား injector တစ်ခု ESA (Bedford, MA) Coulochem II ကို EC အ detector နှင့် dual-ရုပ်သံလိုင်းဇယားအသံဖမ်း (Kipp ပါဝင်သည် နှင့် Zonen, ဘိုဟီးမီးယား, နယူးယော့) ။ လျှပ်ကူးပစ္စည်း 1 + 450 MV; electrochemical detector parameters များကိုအောက်ပါခဲ့ကြသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း 2, -300 MV; နှင့်ဆဲလ်, -450 MV စောင့်ရှောက်လော့။ ကောက်ယူပုံမှန်စုံစမ်းစစ်ဆေး Recovery, စသည်တို့အတွက် နှင့်အခန်းအပူချိန်မှာ 22 DA ဘို့%, DOPAC များအတွက် 18% နှင့် HVA များအတွက် 18% ရှိကြ၏။
အဆိုပါ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်မှုကနေအမူအကျင့်အစီအမံစားပွဲတင်အတွက်တင်ပြကြသည် 1။ mount မှ latency, intromit နှင့်သုက်, အဖြစ် postejaculatory ကြားကာလကိုပထမဦးဆုံးသုတ်ရည်လွှတ်ယခင်သင်တန်းသူများအားအလားတူခဲ့ကြသည်ပြီးနောက် (Data ပြမပါ) ။ ဒါက microdialysis လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြောင်းလဲမပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သတ်မှတ်ထားမတိုင်မီသုက်၏ယုတ်အရေအတွက်အားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, အသီးအသီးသုတ်ရည်လွှတ်ရှေ့ intromissions ၏နံပါတ်တစ်တိုးတက်သောကျဆင်းခြင်း, နှင့် postejaculatory ကြားကာလ (Data ပြမပါ) အတွက်တိုးတက်သောတိုး (7.8 ± 0.5) တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခဲ့သည် , (ယခင်လေ့လာမှုများအစီရင်ခံကြောင်းဆင်တူခဲ့သည်သဲသောင်ပြင်များနှင့်ဂျော်ဒန်, 1956; မုဆိုးနှင့် Whalen, 1961; Fisher သည် 1962; Bermant et al ။ , 1966; Rodriguez-Manzo နှင့်ဖာနန်ဒက်ဇ-Guasti, 1994; Mas et al ။ , 1995d) ။ တစ်ဦးချင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအမျိုးသမီး 1 နှင့်အတူအောင်မြင်သုက်၏နံပါတ်, အမျိုးသမီး 1 နှင့်အတူ copulating သုံးစွဲသည့်အချိန်, နှင့် satiation စံနှုန်းရောက်ရှိရန်လိုအပ်အမျိုးသမီး 1 ၏တင်ပြချက်များ၏နံပါတ် (စားပွဲတင်မှလေးစားမှုနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည် 1, အောက်ခြေ) ။ အဆင့် 1 ပြည့်စုံခဲ့သည်အထိတချို့ကကြွက် (အမျိုးသမီး5၏မြောက်မြားစွာပြန်လည်လက်ခံကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်n = 3) ။ မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှအမျိုးသမီး 1 အားမရနှင့် partition ကို၏ဖယ်ရှားရေးသုတ်ရည်ထိမှဦးဆောင်မူလတန်းအစာစားချင်စိတ်တွေကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပေမည်များ၏ပြုမူသောအမှု။ (သဲသောင်ပြင်များနှင့်ဂျော်ဒန်, 30 ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်ဒါဟာတစ်တောင်ပေါ်မှာမပါဘဲ 1965 မိ၏တစ်ဦး satiation စံနှုန်းကြောင်းကိုလည်းသတိပြုသင့်သည်, Mas et al ။ , 1995b), မတရားသည်နှင့်တစ်ဦးကြွက်အချိန်ပိုမိုပေးထားတပ်ဆင်ထားကြပါပြီမဟုတ်ကြောင်းအာမမခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါတောင်မှနှောင့်နှေးသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အစားထိုးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအမျိုးသမီး 1 (ဥပမာအဆင့်4နှင့် 5) နဲ့သက်တမ်းတိုးသုတ်ရည်ထိအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရလဒ်ခဲ့ပါဘူး။
အဆိုပါ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းအပြုအမူ
အားလုံးကြွက်ဟာ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုပြ။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုမျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှအမျိုးသမီး2၏နေရာချထားနှင့်ဆက်စပ်လျက်, အထူးသဖြင့်, partition ကို၏ဖယ်ရှားရေးဒီရလဒ်မှလှူဒါန်းခဲ့ကြပေမည်, သို့သော်, တဖန်ဤဖြစ်ရပ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်အစောပိုင်းစမ်းသပ်မှုများတွင်သုတ်ရည်ထိသက်တမ်းတိုးဖို့လုံလောက်ကြဘူး။ အမျိုးသမီး 1 နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို2နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အစီအမံအကြားနှိုင်းယှဉ်သုံးပြီးလုပ်ခဲ့ကြသည် t တစ်ဦး Bonferroni ဆုံးမခြင်းနှင့်အတူစမ်းသပ်မှု။ အမျိုးသမီး2တုံ့ပြန်တောင်ပေါ်မှာများနှင့် intromission latency အမျိုးသမီး 1 နှင့်အတူပထမဦးဆုံး copulatory ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းအတွက်သူများအနေဖြင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ကြပေမယ့်သိသိသာသာနည်းပါးလာသုက် (ဆိုလို,2vs 0.6 အားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်, ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီး 4.2 နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ဒီထက်ခိုင်မာတဲ့ရှိ၏ F = 49.86;p <0.01) နှင့် intromissions (ဆိုလို = 11.2 vs 37.0;F = 20.17; p <0.05) ပထမ ဦး ဆုံးနာရီအတွင်း။ ပထမတစ်နာရီတွင်အမျိုးသမီး ၁ နှင့် ၂ တွင်သိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာအမျိုးသမီး 1) ၏ satiation သောအဘို့ကိုစဉ်အတွင်းအသုံးပြုအမျိုးသမီးကတော့ခိုင်မာနေဆဲ proceptive (ဆိုလိုသည်မှာဖွယ်ရှိနေသည်ပျံတတ်သောမီး) နှင့်အထီးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အဆက်အသွယ်၏ပြီးပြည့်စုံသောကြာချိန်များအတွက်လက်ခံ (ဆိုလိုသည်မှာ lordosis) အပြုအမူပြသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ။
ပထမသုံးအခြေခံနမူနာ SEM ±ယုတ်အဖြစ်တင်ဆက် DA နှင့် microdialysates အတွက်၎င်း၏ metabolites ၏ Basal nanomolar ပြင်းအား, ခဲ့ကြသည်: DA, 3.0 ± 0.7; DOPAC, 619.1 ± 77.7; နှင့် HVA, 234.2 စုံစမ်းစစ်ဆေးပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက် uncorrected (49.0 ±;n = 5) ။ ဤရွေ့ကားတန်ဖိုးများ 100% အခြေခံရမှတ်ကိုယ်စားပြုသည်။
အပြုအမူသတ်မှတ် data တွေကိုမှတ်သည်စမ်းသပ်မှုသည်ကြွက်မှဘုံ၏အသီးအသီးအဆင့်မှသက်ဆိုင်ရာ, neurochemical ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ငါးနမူနာအမျိုးသမီး 1 ၏တင်ဆက်မှုအပြီးအမျိုးသမီး 1 ၏ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပြီးနောက် (2) ခုနစျပါးနမူနာ, (1) လေးခုနမူနာအမျိုးသမီး3နှင့်အတူ copulatory အပြုအမူမရှိခြင်းပူးတွဲနှငျ့ (2): ဤအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။ ဂဏန်း 1 DA (လိုင်းဂရပ်၏ပြင်းအားပြောင်းလဲမှုများသရုပ်ဖော်, အလယ်တန်း) နှင့် DA metabolites (လိုင်းဂရပ်, ထိပ်တန်း) paralleling copulatory အပြုအမူ (ဘားဂရပ်, အောကျခွေ) ကို Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်စမ်းသပ်ကာလအတွင်း။
နျူကလိယဟာ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ neurochemical ဆက်စပ်မှု accumbens ။ ပထမဦးဆုံးရှစ်နမူနာအဆင့် 1 ထံမှ3မှသက်ကရာဇျစဉျစဉ်ဆက်မပြတ် data တွေကိုမှတ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ နမူနာ 1 စတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံး precopulation အခြေခံနမူနာ (ဖြစ်ပါတယ်Bas) ။ နမူနာ2(မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှအမျိုးသမီး 1 ၏နိဒါန်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်scr) ။ 15 မိပြီးနောက်မျက်နှာပြင်မှဖယ်ရှားခဲ့သည်နှင့်ကြွက် (နမူနာ 3-8) copulate ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါချိုး ထိုအပေါ် x-axis ကနဦးအမျိုးသမီးနှင့်အတူတိုးချဲ့ကာလအဘို့ copulated သုံးကြွက်များကနေအချက်အလက်များ၏ဖယ်နဲ့ကိုက်ညီ။ နောက်ဆုံးကိုးနမူနာသက်ကရာဇျစဉျကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိကြ၏။ နမူနာ9နှင့် 10 အဆင့်3(ကတောင်ပေါ်မှာမပါဘဲဆိုလိုသည်မှာ 30 မိ) ၏ satiation ကာလကိုက်ညီတဲ့။ အမျိုးသမီး 1 ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှ reinserted (နမူနာ 11) နှင့်, 15 မိခဲ့မျက်နှာပြင် (နမူနာ 12) မှဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သုတ်ရည်ထိကငျးမဲ့ 15 မိပြီးနောက်အမျိုးသမီး2မျက်နှာပြင် (နမူနာ 13) နောက်ကွယ်မှထားရှိခဲ့ပါသည်။ နမူနာ 14-17 အမျိုးသမီး2နှင့်အတူသုတ်ရည်ထိကိုက်ညီတဲ့။ တောင်ပေါ်မှာအရေအတွက်, intromissions, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီ 15 မိ microdialysis နမူနာနဲ့ဆက်စပ်သုက်ထဲမှာပြသနေကြသည် အောက်ခြေဘားဂရပ်။ Neurochemical data တွေကိုအခြေခံပြင်းအား၏ရာခိုင်နှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ NAC DA အတွက်အပြောင်းအလဲများ (တံခါးပိတ်ရင်ပြင်), DOPAC (တံခါးပိတ်စက်ဝိုင်း), နှင့် HVA (ပွင့်လင်းစက်ဝိုင်း) efflux အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည် လိုင်းဂရပ်များ။ အောက်ပါနှိုင်းယှဉ်ခဲ့: နမူနာ 1-2 နှိုင်းယှဉ်အခြေခံနမူနာ 10; နမူနာ 10 နှင့် 11 သာရှိပြီးပြည်ပမှသစ်ကိုအခြေခံနမူနာ 12; နမူနာ 12-13 (နှိုင်းယှဉ်သစ်ကိုအခြေခံနမူနာ 17 *p <0.05; ** p <0.01) ။ လွတ်လပ်သော t စမ်းသပ်မှုအခြေခံတန်ဖိုးများ (နမူနာ 1, 10 နှင့် 12) အကြားကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအခြေခံ (နမူနာ 1) မှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုအဘို့, †p <0.05 ။
သီးခြားတလမ်း, ထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVAs အမျိုးသမီး 1 (နမူနာ 1-12) နဲ့ဆက်စပ် neurochemical ဒေတာနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို2(နမူနာ 12-17) ရက်နေ့တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကဦး နှိုင်းယှဉ် Dunn ရဲ့မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်မှု (Bonferroni သုံးပြီးလုပ်ခဲ့ကြသည် t) ။ အောက်ပါသုံးခုအဓိကနှိုင်းယှဉ်ခဲ့: (1) ကနဦးအခြေခံ (နမူနာ 1) နမူနာ 2-10 (အမျိုးသမီး 1 မှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု) သာရှိပြီးပြည်ပမှ, (2) ဒုတိယအခြေခံ (နမူနာ 10) နမူနာ 11 နှင့် 12 (အမျိုးသမီး 1 မှ reexposure) သာရှိပြီးပြည်ပမှ နှင့် (3) တတိယအခြေခံ (နမူနာ 12) နမူနာ 13-17 (အမျိုးသမီး2မှထိတွေ့မှု) သာရှိပြီးပြည်ပမှ။
အမျိုးသမီး 1 တုံ့ပြန် DA efflux အတွက်သိသာထင်ရှားသောခြုံငုံပြောင်းလဲမှု [ရှိခဲ့သည်F(11,44) = 8.48; p <0.001] နှင့်အမျိုးသမီး2[F(5,20) = 2.83;p <0.05] ။ အမျိုးသမီး ၁ သည်မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်ရှိသည့်အခါ DA efflux သိသိသာသာတိုးလာသည် (+ ၄၄%)p <0.05; နမူနာ 2) ။ စုစည်းနေစဉ်ကာလအတွင်း DA ပြင်းအားသည်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည် (+ ၉၅%)၊p <0.01) ပထမ ဦး ဆုံး copulatory ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း (နမူနာ 3) ကာလအတွင်း။ DA သည်စုဆောင်းနေစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမြင့်မားစွာဆက်လက်တည်ရှိပြီးတောင်ပေါ်တွင်မတပ်ဆင်ထားသည့်မိနစ် ၃၀ အတွင်းအခြေခံအာရုံစူးစိုက်မှုသို့သာပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည် (နမူနာ ၉ နှင့် ၁၀) ။ မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှအမျိုးသမီး ၁ ကိုပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း (နမူနာ ၁၁) သာမကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းသော်လည်းကောင်း (နမူနာ ၁၂) မပါရှိဘဲဒုတိယအခြေခံတန်ဖိုး (နမူနာ ၁၀) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက DA ပြင်းအားမြင့်မားခြင်း။ မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှအမျိုးသမီး ၂ ယောက် (နမူနာ ၁၃) ၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိနေခြင်း (နမူနာ ၁၃) သည်စာရင်းအင်းအရအရေးပါမှုမရရှိခဲ့သည့်တတိယအခြေခံတန်ဖိုး (နမူနာ ၁၂) မှ DA efflux (30%) တွင်အနည်းငယ်တိုးလာသည်။ အမျိုးသမီး ၂ နှင့်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးလိုက်ခြင်းသည်သိသိသာသာ (၃၄%) တိုးခဲ့သည်။p <0.05) ပထမ ဦး ဆုံးစုဆောင်းခြင်းနမူနာ (နမူနာ 14) ကာလအတွင်း DA efflux အတွက်။ နောက်နမူနာသုံးခုတွင်အားနည်းသော copulatory အပြုအမူများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း DA ပြင်းအားသည်အခြေခံတန်ဖိုးများ (နမူနာ ၁၅-၁၇) သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ လွတ်လပ်သော t "အခြေခံ" နမူနာ (ဆိုလိုသည်မှာ 1, 10 နှင့် 12) အကြားကောက်ယူစမ်းသပ်မှုသည်ဤတန်ဖိုးများကိုသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားကြဘူးကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။
အမျိုးသမီး 1 ရုံနမူနာမှဆွေမျိုး, (အကွာအဝေး, 1-25%) နှင့်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်း (အကွာအဝေး, 47-13%) မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှပစ္စုပ္ပန်အခါအမျိုးသမီး 37 ပြန်လည်ထိတွေ့ပေါ်လွင်လာသည့်အခါသုတ်ရည်ထိပြန်လည်စတင်သောသုံးကြွက်များတွင် NAC DA ပြင်းအားတိုးလာ အမျိုးသမီး၏ပြန်လည်လက်ခံကျင့်သုံးဖို့မီ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကျန်းမာသန်စွမ်းကြီးနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှဦးဆောင်သည့်အခါဤအတိုး, သို့သော်, သာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
DOPAC အတွက်သိသာထင်ရှားသောခြုံငုံအပြောင်းအလဲများ [F(11,44) = 9.57; p <0.001] နှင့် HVA [F(11,44) = 12.47; p <0. 001] ပြင်းအားသည်အမျိုးသမီး ၁ ကိုတုန့်ပြန်သော်လည်းအမျိုးသမီးသည်မဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ၂။ အမျိုးသမီးများ ၁ မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှအမျိုးသမီး (၁) ကိုတင်ဆက်မှုတွင် metabolism ပါဝင်မှုအနည်းငယ်သည် (ကိစ္စရပ်နှစ်ခုလုံးတွင် ၁၅%) တိုးပွားလာသော်လည်း၎င်းသည်သိသာထင်ရှားမှုမရှိပါ။ စာရင်းအင်း။ သို့သော်ကော်ပိုရေးရှင်းနေစဉ်အတွင်း DOPAC နှင့် HVA တို့၏ပြင်းအားကို (နမူနာ ၃-၈) တွင်အများဆုံးတန်ဖိုးများ (+1 နှင့် + 2% အသီးသီးအသီးသီးရရှိခဲ့သည်) ရှိသည်။ p <0.01) 60 မိနစ်ပြီးနောက် (နှစ် ဦး စလုံးကိစ္စများတွင်နမူနာ 6) ။ အမျိုးသမီး ၁ နှင့်အဆက်အသွယ်အဆုံး၌ (ဥပမာ ၉ နှင့် ၁၀) လိင်ဆက်ဆံမှုပြုစဉ်ကာလအတွင်း metabolite ပါဝင်မှုလျော့နည်းသွားသော်လည်း၊p <0.05 နှစ် ဦး စလုံးကိစ္စများတွင်) ။ မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှအမျိုးသမီး ၁ ကိုပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း (နမူနာ ၁၁)၊ မျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားပြီးနောက်အမျိုးသမီး ၁ ကိုကြည့်ရှုခြင်း (နမူနာ ၁၂) နှင့်အမျိုးသမီး ၂ (နမူနာ ၁၃) ၏မိတ်ဆက်ခြင်းသည် metabolite ပြင်းအားကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အနည်းငယ်နှင့် (သို့သော်စာရင်းအင်းအရအရေးမကြီးပါ) DOPAC နှင့် HVA ပြင်းအားများ (အခြေအနေနှစ်ခုလုံးတွင် ၂၃%) တိုးလာခဲ့သည် (နမူနာ ၁၂) သည်အမျိုးသမီး ၂ နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စုစည်းခြင်း (နမူနာ ၁၄) နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဤတိုးတက်မှုသည်ခဏတာသာဖြစ်ပြီးကျန်သုံးမျိုး (၁၅-၁၇) အတွက်အခြေခံတန်ဖိုးများသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ လွတ်လပ်သော tတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေမတူညီတဲ့မဟုတ်, ပထမဦးဆုံးအခြေခံနမူနာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သိသိသာသာမွငျ့မားကျန်ရစ်ပေမယ့် "အခြေခံ" နမူနာကြားတွင်ကောက်ယူစမ်းသပ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ 1, 10 နှင့် 12), ဒုတိယနှင့်တတိယအခြေခံတန်ဖိုးများ (အသီးသီးနမူနာ 10 နှင့် 12,) ထိုညွှန်ပြ (DOPAC နှင့် HVA များအတွက်p <0.05 နှစ် ဦး စလုံးကိစ္စများတွင်) ။
Microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးပုံကို (NAC တည်ရှိသောခဲ့ကြသည်။2) bregma (ပြားချပ်ချပ်ဦးခေါင်းခွံ) မှ + 1.20 မီလီမီတာ + 1.70 တိုးချဲ့နေတဲ့အကွာအဝေး၌တည်၏။ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဆိုပါ mediolateral လေယာဉ်လည်းရှိ၏ ဒေတာ NAC ၏ shell ကိုနှင့် core ကိုငျဒသေကနေနမူနာကိုထင်ဟပ်။
အဆိုပါ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်မှုများတွင်အသုံးပြုအထီးကြွက်များ၏ NAC အတွင်း microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး၏တည်နေရာ။ Shaded စတုဂံ အဆိုပါ microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးများ၏ထိတွေ့မြှေးပါးဧရိယာကိုက်ညီတဲ့။ serial Coronal ဦးနှောက်အပိုင်းကနေ redrawn ခဲ့ကြသည်Paxinos နှင့် Watson (1986).
အစောပိုင်းကအစီရင်ခံစာများနှင့်အတူသဘောတူညီချက်မှာတော့လက်ရှိရလဒ်တွေကိုတို့ကအကဲဖြတ်အဖြစ်အစာစားချင်စိတ်များနှင့်အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သူတွေရဲ့စားသောက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်တိုးမြှင် mesolimbic DA ဂီယာကိုသရုပ်ပြVivo အတွက် microdialysis (Mas et al ။ , 1990; Pfaus et al ။ , 1990;Pleim et al ။ , 1990; Damsma et al ။ , 1992; Wenkstern et al ။ , 1993; Fumero et al ။ , 1994; Mas et al ။ , 1995a,b,d) ။ ထို့အပြင်ဤရလဒ်များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation နှင့်ဝတ္ထုလက်ခံအမျိုးသမီး (အ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု) မှတုန့်ပြန်သုတ်ရည်ထိနောက်ဆက်တွဲ reinitiation များအတွက် neurochemical Correlate သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ဒေတာတစ်ဝတ္ထုလက်ခံအမျိုးသမီး၏စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုဂုဏ်သတ္တိများ, အလှည့်၌, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ reinitiation နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါတစ်လိင်ဝအထီးကြွက်များတွင် NAC DA ဂီယာတိုးမြှင့်ဖို့အစေခံစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည်ကို screen နောက်ကွယ်မှတစ်ဝတ္ထုအမျိုးသမီး၏တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်း NAC DA အတွက်အနည်းငယ်တိုးလာအတွက်ပထမဦးဆုံးထင်ရှားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို2(ပုံနှင့်အတူသက်တမ်းတိုးသုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းတစ်ဦးထက်ပိုသိသာတိုးအဖြစ်ရဆုံးခိုငျတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။1).
မျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှပထမဦးဆုံးလက်ခံအမျိုးသမီး၏ရှေ့မှောက်တွင်အလားတူပုံစံဒီဇိုင်း (44% ကို အသုံးပြု. ယခင်စမ်းသပ်ချက်အစီရင်ခံခဲ့ရာမှပြင်းအားအလားတူ (အခြေခံကနေ 30%) NAC DA efflux အတွက်အားကောင်းတဲ့အစာစားချင်စိတ်တိုးမှု Pfaus et al ။ , 1990; 35%,Damsma et al ။ , 1992) ။ ဒါ့အပြင်ဒီလေ့လာမှုများနှင့်အတူသဘောတူညီချက်အတွက် NAC DA efflux (ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်မှုအတွက်အခြေခံအထက်> 95% မှ) ကိုစုဆောင်းခြင်းစဉ်အတွင်းထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့သည့်လေ့လာရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ consummatory အပြုအမူတွေကိုတိုးမြှင့် NAC DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်သောအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့် (Wenkstern et al ။ , 1993; Wilson က et al ။ , 1995), ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အခြေအနေတွင်စည်းကမ်းချက်များ "အစာစားချင်စိတ်" နှင့် "သူတွေရဲ့စားသောက်" ဆနျးစစျဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ အမျိုးသမီးမျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောအတွင်းအဆင့်သီးသန့်အစာစားချင်စိတ်သို့မဟုတ်ကြိုတင်ဖြစ်ပါတယ်သွားရမည်အကြောင်း, ထိုသုတ်ရည်ထိအဆင့်စဉ်အတွင်းအပြုအမူသက်သက်သာသူတွေရဲ့စားသောက်စဉ်းစားမရပါ။ သောကြောင့် "အစာစားချင်စိတ်" ဟုလှုံ့ဆော်အပြုအမူ (သုတ်ရည်ထိ) ၏ကုဖို့ဦးဆောင်အားလုံးအပြုအမူတွေကိုဖော်ပြရန်အသုံးပွုနိုငျ, မူလတန်းအပြုအမူယောက်ျားပြပွဲသည် "သူတွေရဲ့စားသောက်" အဆင့်အတွက်တက်ကြွစွာအကောင်းဆုံးအစာစားချင်စိတ်အဖြစ်ဖော်ပြနေစဉ်; အထီး copulate မှအမျိုးသမီးလိုက်စားသူ့အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအများစုသုံးစွဲသည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းတှငျကြှနျုပျတို့သူတွေရဲ့စားသောက်နှင့်အတူအလုပျသ NAC DA ဂီယာပတျသကျနိုငျသညျ လည်းပဲ အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပြင်းထန်သောအစာစားချင်စိတ်အစိတ်အပိုင်းများကို။
ဒုတိယဖို့ Access ကို, ဝတ္ထုအမျိုးသမီးတိုင်းဘာသာရပ်အတွက်သက်တမ်းတိုးသုတ်ရည်ထိခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများ (နောက်ပိုင်း 24 နာရီကိုစမ်းသပ်သည့်အခါပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်မှုများတွင်အသုံးပြုတယ့်အလားတူအပြုအမူ protocol ကိုသုံးပြီးမွတ်မပြေနိုင်သောရန် copulate ခွင့်ပြုခဲ့ကြွက်များ၏အများစု, မိတ်လိုက်ပြန်လည်စတင်မပြုခဲ့ကြောင်းပြသကြသဲသောင်ပြင်များနှင့်ဂျော်ဒန်, 1956) ။ ဒါဟာ olfactory အဖြစ်အမြင်အာရုံနှင့်အာရုံတွေကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြရသောအမျိုးသမီး2၏ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုဂုဏ်သတ္တိများ၏ရှေ့မှောက်တွင်, အသစ်တဖန်သုတ်ရည်ထိမှုကြောင့်ဖွယ်ရှိသည်။ ပြန်ဖြေခံရဖို့ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်အထီးကြွက်သူမကြာသေးမီက mated သည့်အတူအမျိုးသမီးကနေဝတ္ထုအမျိုးသမီးခွဲခြားသောအရာကိုယန္တရားအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကြောင်းယန္တရားများအတွက်တစ်ဦးက site ကိုအဓိက olfactory သည့်စနစ်၌အိပျနိုငျသညျ။ ဒါဟာ (ဒီစနစ်၏သမာဓိဟမ်းစတားအတွက် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင်းအစီရင်ခံထားသည်Johnston နှင့် Rasmussen, 1984) ။ တစ်ဦး pheromones မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်ကိုကြွက်များတွင်မကြာသေးမီကဖော်ပြထားခဲ့သည့်အတွက်သို့သော်အဆိုပါ vomeronasal-ဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory စနစ်,, (Kaba et al ။ , 1994), စတဲ့သုဒ္ဓကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ်စတှငျက NAC DA ဂီယာအတွက်တိုးသုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် Vivo အတွက် estrus အတွက်အမျိုးသမီးကြွက်များနှင့်ထိတွေ့ခဲ့အိပ်ယာနှင့်အတူတင်ပြအထီးကြွက်များတွင် voltammetry (Louillot et al ။ , 1991; မစ်ချယ်နှင့် Gratton, 1992) ။ K သည်၏ထို့ပြင်လျှောက်လွှာ+ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory မီးသီးများ၏ vomeronasal အာရုံကြောအလွှာရန်, အဖြစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory မီးသီးကိုယ်တိုင်ကမှ, (NAC DA ဂီယာတိုးမြှင့်ဖို့လုံလောက်ခဲ့တယ်မစ်ချယ်နှင့် Gratton, 1992).
အမျိုးသမီး 15 နှင့်အတူသုတ်ရည်ထိရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းမိပထမ2NAC DA အတွက်သိသိသာသာတိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး 1 မတူဘဲ, အမျိုးသမီး2နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဟာအစာစားချင်စိတ် (12%) သို့မဟုတ်သူတွေရဲ့စားသောက် (34%) အဆင့်ဖြစ်စေစဉ်အတွင်းအတူတူပြင်းအား၏ NAC DA အတွက်တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါဘူး။ NAC DA တွင်ဤအသေးစားတိုး, သို့သော်, အမျိုးသမီး2နှင့်နှိုင်းယှဉ်အမျိုးသမီး 1 နဲ့ဖော်ပြပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများလျှော့ချအဆင့်နှင့်အတူကောင်းစွာပတျသကျ။ Metabolite ပြင်းအားကနဦးအခြေခံတန်ဖိုး (နမူနာ 10) မှသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်အသစ်အခြေခံပြင်းအား (နမူနာ 12 နှင့် 1) တွင်ရရှိလာတဲ့, အမွတ်မပြေနိုင်သောအဆင့်စဉ်အတွင်းမွငျ့မားနျြရစျ။
သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်း DOPAC နှင့် HVA ပြင်းအားအတွက်တိုးလာအတွက်ယာယီသုံးနေပြီမိဘဝင်း, DA ၏ metabolites အဖြစ်၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒါဟာ (အနည်းဆုံး pharmacologically မောင်းနှင်မဟုတ်ကြောင်းသဘာဝအပြုအမူစဉ်အတွင်း, အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအသုံးဝင်သောအညွှန်းကိန်းများကိုပေးစွမ်း microdialysis metabolite ပြင်းအားကြောင်းအကြံပြုထားသည်Damsma et al ။ , 1992; Fumero et al ။ , 1994) ။ metabolite ပြင်းအားပင် DA ပြင်းအားအခြေခံတန်ဖိုးများ pretest မှပြန်လာသောအခါကဒီစမ်းသပ်မှုများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ကာလ, စဉ်အတွင်းမွငျ့မားကျန်ရစ်ဆိုတဲ့အချက်ကို, ဒီအကြံပြုချက်အပေါ်သံသယတတ်၏။
သူတို့ satiation မှ copulated ပြီးမှဒီစမ်းသပ်မှုတွင်တွေ့မြင် DA metabolite ပြင်းအား၏ persistent မြင့် (ထို medial preoptic ဧရိယာ (mPOA) ပထမနေ့ကကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိ DA metabolites ၏ပရိုဖိုင်းကိုထင်ဟပ်Mas et al ။ , 1995a,b) ။ မိတ်လိုက်ကာလတစ်ပုံသေကြာချိန်၏ satiation ရောက်ရှိဖို့လိုအပ်သောအချိန်ထက်အများကြီးတိုတောင်းဖြစ်ပါတယ်အခါ NAC သို့မဟုတ် mPOA အတွက် DOPAC နှင့် HVA ပြင်းအား၏ထောမြင့်တက်အမြဲလေ့လာတွေ့ရှိကြသည်မဟုတ်။ ဥပမာအားဖြင့်များစွာသောလေ့လာမှုတွေ (DOPAC ပြင်းအားအမျိုးသမီးဖယ်ရှားခဲ့သည်မကြာမီပြီးနောက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းမွငျ့မားကျန်ရစ်ပေမယ့်အခြေခံတန်ဖိုးများကျဆင်းသွားခဲ့ပြခဲ့ကြPfaus et al ။ , 1990; Pleim et al ။ , 1990; Damsma et al ။ , 1992;Hull et al ။ , 1993; Wenkstern et al ။ , 1993; Hull et al ။ , 1995) ။ အားဖြင့်လေ့လာမှုမှာ Mas et al ။ (1995b)အဆိုပါ mPOA အတွက် DOPAC နှင့် HVA ၏ Basal extracellular ပြင်းအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ကာလမှသက်ဆိုင်ရာ4ရက်ဆက်တိုက်ကျော်မြင့်မားသောနျြရစျ။ တိရိစ္ဆာန်များသုတ်ရည်ထိပြန်လည်စတင်မယ့်ရှေ့တော်၌ထိုစတုတ္ထနေ့သည်, metabolites ၏ Basal ပြင်းအား presatiation တန်ဖိုးများနှင့်နီးစပ်သောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာ DA အဲဒီ receptor blockers (များ၏အုပ်ချုပ်မှုအပြီးမြင်ကြသူတို့အား neurochemical အပြောင်းအလဲများကို၏ပုံစံကိုနှိုငျးယှဉျZetterström et al ။ , 1984; Imperato နှင့် DiChiara, 1985) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ပြည်နယ်တစ်ခု "endogenous neuroleptic" အဖြစ်ပြုမူရသော prolactin လွှတ်ပေးရန်, (မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါအကြံပြုခဲ့ကြMas et al ။ , 1995a,b,d) ။ ဒါဟာ (neuroleptic အုပ်ချုပ်ရေး extracellular metabolite ပြင်းအားနှင့် DA efflux အတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းရှင်းပါတယ်Zetterström et al ။ , 1984; Imperato နှင့် DiChiara, 1985) ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, Mas et al ။ (1995a,b) mPOA DA ပြင်းအား detect နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ DOPAC နှင့် HVA ပြင်းအားမြင့်မားသောကျန်ရစ်သော်လည်းပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ NAC အတွက် DA ပြင်းအား, တန်ဖိုးများ precopulation သို့ပြန်သွား၏။ ဒီပုံစံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောသွေးဆောင်ဖို့ NAC အတွက်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး endogenous neuroleptic များအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူကွဲလွဲနေသည်။
လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအတွက် mesolimbic DA အာရုံခံများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု (ပေးထားFibiger နှင့် Phillips က, 1986; ဘလက်ဘန်း et al ။ , 1992; Kalivas et al ။ , 1993; LeMoal, 1995) နှင့်ဝတ္ထုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှု၎င်းတို့၏ sensitivity ကို (Fabre et al ။ , 1983; Schultz, 1992; Mirenowicz နှင့် Schultz, 1994), ဝတ္ထုအမျိုးသမီးတုံ့ပြန် NAC DA ၏ extracellular ပြင်းအားအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတိုးဒီ DA စနစ်လုပ်ဆောင်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ reinitiation များအတွက်အရေးကြီးသောသောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ DA ဂီယာအတွက်အစာစားချင်စိတ်များနှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်တိုး၏အပြင်, အစီရင်ခံစာများ (Hull et al ။ , 1993, 1995;Mas et al ။ , 1995b; Sato et al ။ , 1995) နှင့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု (Shimura et al ။ , 1994) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းအထီးကြွက်များ၏ mPOA ၌ဤဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု၏သက်တမ်းတိုးသုတ်ရည်ထိဝိသေသအထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအတွက် mesolimbic DA system အတွက်အထွေထွေအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူစောင့်ရှောက်မှာ, ကောင်းကောင်း DA ၏ extracellular ပြင်းအားကိုလည်းစဉ်အတွင်းရှေ့တော်၌, ခြီးမွှောကျနေကြပြီး, တစ်ဦးကိုချက်ချင်းမုန့်ညက်စားသုံးမှုပြီးနောက်, အခြေခံတန်ဖိုးများပြန်လည်နှင့်အတူ (နောက်ပိုင်းမိနစ် ~30 မြဲမြံစွာတည်နေသည်Wilson က et al ။ , 1995) ။ ဒါဟာကောင်းစွာအစားအစာများကသွေးဆောင်မွတ်မပြေနိုင်သော၎င်း၏အာရုံခံဂုဏ်သတ္တိများကလွှမ်းမိုးကြောင်းလူသိများသည်။ လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ (သူတို့မွတ်မပြေနိုင်သောရန်တိုက်ကျွေးခဲ့ကြရာပေါ်တွင်အစားအစာငြင်းပယ်စားမခံခဲ့ရသောအခြားအစားအစာများကိုသုံးစွဲRolls, 1986) ။ ဒါက NAC အတွက် extracellular DA efflux အစားအသောက်တစ်ဝတ္ထုအမျိုးအစားများ၏တင်ပြချက်အားဖြင့်ရွေးချယ်တိုးလာပေမယ့်အစားအသောက်ဖြင့်ဆက်စပ်အတွက်လက်ရှိလေ့လာမှုအစီရင်ခံဖို့အလားတူတဲ့ထုံးစံ၌မွတ်မပြေနိုင်သောရန်မကြာသေးမီကလောင်မခံကြလိမ့်မယ်ရှိမရှိမှအဖြစ်မေးစရာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု။ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့လျှင်, သဘာဝဆုလာဘ်, မွတ်မပြေနိုင်သောနှင့် mesolimbic DA ဂီယာ၏အာရုံခံဂုဏ်သတ္တိများအကြားကဒီယေဘုယျကြားဆက်ဆံရေးစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များ၏စည်းမျဉ်း၌ဤအာရုံကြောစနစ်ဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍဆိုလိုပေသည်, အရာ၏အနှောင့်အယှက်စားခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို၏လေးနက်ပုံမမှန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ ။
ဤလုပ်ငန်းကိုကနေဒါ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီအနေဖြင့်အုပ်စုအစီအစဉ် Grant က PG-12808 ကထောက်ခံခဲ့သည်။
စာပေးစာယူအန်သိုနီ G. အ Phillips က, စိတ်ပညာဌာန, 2136 အနောက် Mall ကဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်, ဗန်ကူးဗား, ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ, ကနေဒါ V6T 1Z4 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
(1956) အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ QJ Exp Psychol 8:121-133.
(1966) အထီးကြွက် copulatory အပြုအမူအတွက် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ယာယီဝိသေသလက္ခဏာများ။ J ကို comp Physiol စိတ်ရောဂါကုသမှု 65:447-452.
(1992) အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ခုခံကာကွယ်အပြုအမူတွေအတွက် Dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ prog Neurobiol 39:247-279.
(1992) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွါး: အသစ်အဆန်းများနှင့်ရွေ့လျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ ပြုမူနေ neuroscience 106:181-191.
Ashton က JP,
Williams က G
(1983) အဆိုပါပြုမူမျောက်များ၏ ventral tegmental ဒေသတွင်း၌အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်ချက်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 9:213-235.
(1986) ဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှု, သိမှတ်ခံစားမှု: mesotelencephalic dopamine စနစ်များ psychobiology ။ in ဇီဝြဖစ်စဉ်လက်စွဲစာအုပ်: အာရုံကြောစနစ် IV, eds Bloom FE, Geiger SD (အမေရိကန်ဇီဝကမ္မဗေဒ Society က, Bethesda, MD), စစ 647-675.
(1993) အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ဆုလာဘ်က်ဘ်ဆိုက်များ၏လျှပ်စစ်ဆွကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွားစေပါသည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 55:131-141.
Fisher က A
(1962) အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation အပေါ်နှိုးဆွအပြောင်းအလဲသက်ရောက်မှု။ J ကို comp Physiol စိတ်ရောဂါကုသမှု 55:614-620.
(1961) အထီးကြွက်များတွင်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲ။ J ကို comp Physiol စိတ်ရောဂါကုသမှု 54:68-71.
(1994) ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ် forebrain ဒေသများရှိ monoamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အတွက်အပြောင်းအလဲများ: တစ် microdialysis လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res 662:233-239.
(1987) ကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှတ်တမ်းတင်ဘို့နှင့်အထွေထွေအဖြစ်အပျက်မှတ်တမ်းတင်တစ်ခုက IBM-PC ကိုအခြေပြုဒေတာစုဆောင်းခြင်းစနစ်။ Physiol ပြုမူနေ 44:825-828.
(1993) သုတ်ရည်ထိအထီးကြွက်များ၏ medial preoptic ဧရိယာ၌ dopamine လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားစေပါသည်။ ဘဝကသိပ္ပံ 52:935-940.
(1995) အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ၌ Extracellular dopamine: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သုတ်ရည်ထိဟော်မုန်းကိုထိန်းချုပ်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ J ကို neuroscience 15:7465-7471.
ြဒပ်မဲ့သော/အခမဲ့ အပြည့်အဝစာသားGoogle Scholar
(1985) စနစ်တကျ neuroleptics ပြီးနောက်နိုးကြွက်များတွင် Dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဇီဝြဖစ် Trans-striatal Dialysis နေဖြင့်လေ့လာခဲ့သည်။ J ကို neuroscience 5:297-306.
(1984) အထီးများကအမျိုးသမီးဟမ်းစတားများ၏တစ်ဦးချင်းအသိအမှတ်ပြုမှု: ဓာတုတွေကိုနှင့် olfactory နှင့် vomeronasal စနစ်များအခန်းကဏ္ဍ။ Physiol ပြုမူနေ 33:95-104.
(1994) တစ်ဦး metabotropic အချိုမှု receptor ၏ activation က olfactory မှတ်ဉာဏ်၏ induction ။ သိပ္ပံ 265:262-264.
(1993) psychostimulants ဖို့ဆေးဝါးဗေဒအရေးကြီးတဲ့၏အာရုံကြော circuitry ။ ပြုမူနေ Pharmacol 4:315-334.
(1995) Mesocorticolimbic dopaminergic အာရုံခံ။ functional နှင့်စည်းမျဉ်းအခန်းကဏ္ဍ။ in Psychopharmacology: တိုးတက်မှု၏စတုတ္ထမျိုးဆက်, eds Bloom FE, ကွေးနီ DJ (တောကျီးကန်း, New York ), စစ 283-294.
(1991) လိင်-related olfactory လှုံ့ဆော်မှုအထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ရွေးချယ်တိုးသွေးဆောင်။ ဦးနှောက် Res 553:313-317.
(1990) အတွက် Vivo voltammetry ခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ်အထီးကြွက် copulating ၏နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးမြှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်။ neuroscience လက်တ 110:303-308.
(1995a) Vivo microdialysis အတွက်အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏ Neurochemical Correlate ။ ဦးနှောက် Res 675:13-19.
(1995b) Voltammetric နှင့် sociosexual interaction ကနေစဉ်အတွင်းဦးနှောက် monoamine neurotransmitter လွှတ်ပေးရေး microdialysis စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 71:69-79.
(1995c) လိင် ့. , ကြွက်များတွင် apomorphine အားဖြင့်မိတ်လိုက်အပြုအမူ၏ induction ။ EUR J ကို Pharmacol 280:331-334.
(1995d) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေ၏ neurochemistry ။ ဘယျလိုမှမအလိုဆန္ဒ၏စမ်းသပ်ပုံစံ။ in လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဆေးဝါးဗေဒ, ed Bancroft J (တောကျီးကန်း, New York ), စစ 115-126.
(1994) မျောက် dopaminergic အာရုံခံအတွက်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုအဘို့ခန့်မှန်းရခက်၏အရေးပါမှု။ J ကို Neurophysiol 72:1024-1027.
Mitchell က JB,
(1992) မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း chronoamperometric လေ့လာမှု: အဆက်စပ်ပစ္စည်း olfactory စနစ်၏ activation အားဖြင့်ရူးနှမ်း Mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်။ neuroscience လက်တ 140:81-84.
(1986) stereotaxic သြဒီနိတ် (2nd ed) မှာအဆိုပါကြွက်ဦးနှောက်။ (ပညာရပ်ဆိုင်ရာ, san Diego မှ).
(1990) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူယောက်ျားကြွက်များတွင်အလယ်ပိုင်း dopamine ဂီယာပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက် Res 530:345-348.
(1995) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ psychopharmacology ။ in Psychopharmacology: တိုးတက်မှု၏စတုတ္ထမျိုးဆက်, eds Bloom FE, ကွေးနီ DJ (တောကျီးကန်း, New York ), စစ 743-758.
(1987) Opioids နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 11:1-34.
(1992) အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ် Neurobiological ဆက်စပ်မှု: dopamine, မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်။ in စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်လေ့လာမှုများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်, ed ကြိုးကိုင်မှု (Wiley, New York ), စစ 31-50.
(1990) နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်၏ဆက်စပ်မှုကြွက်များတွင်ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူ accumbens ။ ဦးနှောက် Res 524:160-163.
(1994) serotonergic နှင့် noradrenergic အေးဂျင့်များကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏ပြောင်းပြန်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 62:127-134.
(1995a) yohimbine, naloxone နှင့် 8-Oh-DPAT အားဖြင့်လိင်မောကြွက်၏ copulatory အပြုအမူများပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းအတွက်ဗဟို noradrenergic စနစ်၏ပါဝင်မှု။ ဦးနှောက် Res Bull 38:399-404.
(1995b) Opioid ရန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation ဖြစ်ရပ်ဆန်း။ Psychopharmacol 122:131-136.
(1986) အာရုံခံ-တိကျတဲ့မွတ်မပြေ။ Nutr ဗြာ 44:93-101.
(1996) လှုံ့ဆျောမှုများ၏အမူအကျင့် neurochemistry: နျူကလိယ၏ dynamic လှုပ်ရှားမှု၏လေ့လာမှုများအတွက်အတိုင်းအတာများနှင့်အယူအဆရေးရာကိစ္စများ dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience နည်းလမ်းများ 64:137-149.
(1995) ကြွက်များတွင်အထီး copulatory အပြုအမူစဉ်အတွင်း medial preoptic ဧရိယာ၌ Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ဦးနှောက် Res 692:66-70.
(1992) အဆိုပါပြုမူမျောက်အတွက် dopamine အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်ချက်။ seminal neuroscience 4:129-138.
(1994) အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာအထီးကြွက်များတွင်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်: Re-အကဲဖြတ်အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တိရိစ္ဆာန်များရွေ့လျား၌တည်၏။ ဦးနှောက် Res 640:215-222.
(1993) လိင်ကလက်ခံအမျိုးသမီးကြွက်မှသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းအထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် Dopamine ဂီယာတိုး။ ဦးနှောက် Res 618:41-46.
Wilson က C,
(1995) Dopaminergic လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်: drive ကို၏အရေးပါမှု။ J ကို neuroscience 15:5169-5178.
Wilson က JR,
(1963) ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွအမျိုးသမီးပြောင်းလဲနေတဲ့ထုတ်လုပ်အထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံ။ J ကို comp Physiol စိတ်ရောဂါကုသမှု 56:636-644.
(1984) intracerebral Dialysis နေဖြင့်လေ့လာနိုးကြွက်များတွင် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဇီဝြဖစ်ပေါ် neuroleptic မူးယစ်ဆေး effect ။ EUR J ကို Pharmacol 106:27-37.